Nhau - Iyo Brand Nyowani Weti Bhegi Yekushandira Shop
Iyo Brand Nyowani Urine Bhegi Shamba Shop
Musi waApril 25th 2020, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd yakaisa mari mutsva weti bag shopu. Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yakavambwa muna 2008. Makore gumi nemaviri apfuura, Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yakazvipira kuve kambani yepasi rese, uye ikozvino isu tine musangano wepasi rose, wemazuva ano.
Mumusangano mutsva, takatengawo michina mitsva ndokuiisa mukugadzirwa. Isu tine inonzwisisika yegungano mutsara. Vashandi vakasiyana vane zvikamu zvakasiyana zvevashandi, uye akasiyana mapato evashandi ane akasiyana mashopu ekugadzira, ayo anoponesa zvakanyanya nguva uye anovandudza kugadzirwa kwekuita. Iyi nyowani yekugadzira musangano ine nzvimbo hombe pane yekare musangano, kugadzirwa kwemasaga weti zviri nyore pano, uye vashandi vane nguva inonzwisisika yekushanda. Zvinogona kutaurwa kuti mumusangano mutsva, kune rimwe divi, unogadzirwa zvakanyanya uye wakasununguka kugadzirwa.
Mushure mekuvhura kweweti bhegi shopu shopu, kukosha kwayo kwakasvikawo pakakwirira. Zvichienzaniswa nekugadzirwa kwemabhegi euori e100000 pamwedzi mu2010, parizvino yave kukwanisa kuburitsa mabhegi eweti 1000000 pamwedzi, kuwedzera ka gumi. Iyo zvakare inogona kuverengerwa neyedu bhizinesi shamwari Reed. Reed akati: "zvakatondishamisa chaizvo, bhegi weti yaunotumira kwandiri inokurumidza kupfuura nakare, uye hunhu hunogara hwakanyanya".
Zvakare nhengo imwe inoumba musangano wedu Li Hua akati: “Chitoro cheUrine chitsva chiri kundipa nzvimbo iri nani yebasa, ndinodada kuve chikamu chimwe cheHuaian Medicom Medical Technology.
Yedu kambani chinangwa chehunhu kutanga, mutengi kutanga, sevhisi kutanga. Iyo yakanakisa yemutengo unoshanda mutengesi ndicho chinangwa chedu.
Post nguva: Kubvumbi-25-2020
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Hot Zvigadzirwa, Sitemap
Kubvisa Catheter, Doro Pad, Iv Catheter, Mucheche Kudyisa Tube, Kuvhiya Nereza Sizes, Doro Kugadzirira Pad,